အခမဲ့သည်တွစ်တာလျှောက်လွှာ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » တွစ်တာ
တွစ်တာ APK ကို
အခုကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ပါ။ ခြိုးဖောကျသတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး, အားကစားနှင့်နိုင်ငံရေးကနေကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်နေ့စဉ်အကျိုးစီးပွားရန်။ ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်ပျက်ရဲ့ဆိုပါက Twitter တွင်ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းအကြောင်းပြောနေတာဘာအပေါငျးတို့သတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ commentary.Be အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူအပြည့်အဝဇာတ်လမ်းကို Get နှင့်ဗွီဒီယိုများကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ခဏရရင်းမြစ်ထဲကနေကိုညွှန်ကြား။
သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျှဝေအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အတွက် join ။ တွစ်တာတွင်သင်သည်, GIF များနှင့်အတူဗီဒီယိုများဓာတ်ပုံများ post တိုင်အောင်, Periscope ခလုတ်ကိုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်ရှိသည်ဖို့အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းလမ်းရှိပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏နေအိမ် Timeline ကို၏တင်မြန်နှုန်းနဲ့ပြဿနာ fixed ပါတယ်။ ဒီပြင်ဆင်ချက်များနှင့်ကျွန်တော် app ကိုမှလုပ်ပြီးပြီအခြားတိုးတက်မှုများရရှိရန်ယခုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ!
30.03 ကို MB
နိုဝင်ဘာလ 23, 2019 မှာ 8: 04 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2017 မှာ 4: 12 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2017 မှာ 10: 04 ညနေ
အကောင်းဆုံး app ကိုက်ဘ်ဆိုက် Amar valo lagay
သြဂုတ်လ 29, 2017 မှာ 9: 23 ညနေ
ဇူလိုင်လ 15, 2017 မှာ 2: 46 ညနေ
မေလ 5, 2017 မှာ 8: 05 ညနေ
ဧပြီလ 13, 2017 မှာ 10: 27 ညနေ
က Gud App ဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2016 မှာ 6: 47 ညနေ
twitter ကောင်းကောင်း ... .. အများဆုံးအသုံးဝင်နှင့်လူမှုအလုပ် browser ကိုဖြစ်ပါတယ်
Ali တစ်ဦး says:
အောက်တိုဘာလ 5, 2016 မှာ 12: 01 နံနက်
သြဂုတ်လ 19, 2016 မှာ 12: 05 နံနက်
အကြှနျုပျ၏ fvrite app များကို်ဆိုက်
ဇွန်လ 27, 2016 မှာ 3: 49 ညနေ
မေလ 30, 2016 မှာ 2: 10 နံနက်
ကျေးဇူးတင်စကားဒီ apk အခမဲ့
Vinod အာရိယန် says:
မတ်လ 13, 2016 မှာ 6: 24 နံနက်
ငါအရှိဆုံးက၎င်း၏ဘေးထွက်တူသောဒီတော့ဒီရိုးရှင်းစွာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် app ကိုကျေးဇူးတင်စကားသငျသညျကို download လုပ်ပါ
အောက်တိုဘာလ 4, 2015 မှာ 4: 30 ညနေ
android downloads, များအတွက်အကောင်းဆုံး site ကို ... ညြကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် !!!
ဇွန်လ 23, 2015 မှာ 5: 31 နံနက်
အကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့နှင့်လွယ်ကူသောဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ site ၏တဦးတည်း
Nashim Khan က says:
မေလ 3, 2015 မှာ 8: 09 နံနက်
ငါ apps များ-apk site ကိုကြိုက်တယ် .........
ဧပြီလ 1, 2015 မှာ 10: 49 နံနက်
ဇန်နဝါရီလ 4, 2015 မှာ 6: 11 ညနေ
ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ကိုချစ်ဒီ app ကိုဒီ app ကအရမ်းကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် becz သို့သော်အချို့ပြဿနာများကိုအမြဲထွက်လာသဒါ plz ဒီစတိုင်နှင့် slove ပြဿနာများကိုပြောင်းလဲ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2014 မှာ 1: 03 ညနေ
ကိုယ့်ကိုပိုပြီး BlackBerry OS ကိုထက်ဟာ android OS ကိုကိုချစ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးကစားရာမှမပါဘဲ၎င်းတို့၏ apps များမှအခြားရွေးချယ်စရာ access ကိုရနှင့်၎င်းတို့၏ apps များအများစု BlackBerry နဲ့မတူပဲအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် Google မှ Android ယောက်ျားတွေလှိမ့ Keep ...
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2014 မှာ 11: 59 နံနက်
Mohd မ Hisyam says:
အောက်တိုဘာလ 4, 2017 မှာ 12: 02 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2014 မှာ 8: 07 ညနေ
ဧပြီလ 21, 2015 မှာ 12: 21 နံနက်
သငျတို့သ s ကို Nice